Akụkọ ihe mere eme nke mkpọmkpọ ebe Rom n'akụkụ osimiri nke Bolonia | Akụkọ njem
Mariela Carril | 11/01/2022 17:00 | España, Ihe ị ga-ahụ
Enwere obodo iji ndịda Spain nke a na-akpọ Bologna. N'ebe a, n'akụkụ osimiri ya, n'ụsọ oké osimiri nke Strait nke Gibraltar, e nwere mkpọmkpọ ebe ndị Rom mara aha ya. Claudia Baelo. Ha dị ihe dị ka afọ 2 ma bụrụ nnukwu akụ.
Taa, na Actualidad Viajes, ndị akụkọ ihe mere eme nke mkpọmkpọ ebe ndị Rom na osimiri Bolonia.
2 Mkpọmkpọ ebe Rome nke Bolonia Beach
3 Ebe ihe ochie nke Baelo Claudia
Mgbe ị na-ege ntị Bologna ị na-akpaghị aka na-eche banyere Italy ma mba, na nke a na ọ bụ a Obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke obodo Tarifa, ógbè Cádiz, ndịda Spain. Ọ dị n'ụsọ oké osimiri nke Oké Osimiri Atlantic, nanị ole na ole 23 kilomita karịa ma ọ bụ obere site n'okporo ụzọ si Tarifa, obodo nke n'aka nke ya dabere na ndị ama ama Ọ bụ Costa de la Luz nke, Strait nke Gibraltar gafere, na-ele Morocco anya.
Bologna nọ n'ọnụ mmiri na mkpọmkpọ ebe ndị Rom na-akpọ anyị taa dị nso n’ụsọ osimiri. A na-atụle mkpọmkpọ ebe kasị zuo ezuo nke obodo ndị Rom ruo taa, a chọtara na Spen. Amamiihe!
Osimiri Bolonia dị ihe dịka kilomita anọ n'ogologo ma nwee nkezi obosara nke mita 4. Mmadụ ole na ole bi ebe a, ọnụ ọgụgụ ya eruteghị mmadụ 120.
Ọnọdụ ebe a nwere ihe ùgwù ma nwee ọmarịcha echiche: ájá ọcha nke Bolonia osimiri na-esi na Punta Camarinal gaa Punta Paloma, ị nwere ike ịhụ ugwu San Bartolome n'ebe ọwụwa anyanwụ na ugwu Higuera na Plata n'ebe ọdịda anyanwụ. Ya mere, a na-emepụta ọdụ ụgbọ mmiri nke dabara adaba nke zuru oke maka ịkwaga ụgbọ mmiri.
Mkpọmkpọ ebe Rome nke Bolonia Beach
Ma gịnị banyere mkpọmkpọ ebe ndị a? Ha na-agwa anyị na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ bi ebe a karịa taa, nke ahụ bụ n'ezie. Eziokwu bụ Baelo Claudia bụ obodo ndị Rom oge ochie na Hispania. Ọ bụ na mbụ a obodo ịkụ azụ na àkwà mmiri azụmahịa ọ makwa otú ọ ga-esi na-enwe ọganihu nke ukwuu n’oge Eze Ukwu Klọdiọs, ọ bụ ezie na n’ihi ala ọma jijiji na-adị mgbe nile, ọ bịara bụrụ nke ọma. gbahapụrụ gburugburu narị afọ nke isii.
Claudia Baelo E hiwere ya na ngwụcha narị afọ nke abụọ BC. iji kwalite ahia na North Africa site na azụ azụ tuna, ahia nnu na mmepụta nke garum (ihe oriri azụ̀ fermented nke a na-ejikarị eme nri n'oge ochie), ọ bụ ezie na ekwenyere na ọ nwekwara ọrụ nchịkwa gọọmenti.
Ọ bụ n'oge Claudio ka ọ nwetara aha obodo na akụ na ụba ya na-egosipụta na ọnụ ọgụgụ na ịdị mma nke ụlọ ya. Ndị ọkà mmụta ihe ochie kwenyere na ọ ruola ọnụ ọgụgụ kasị elu ya n'etiti narị afọ nke mbụ na nke abụọ BC, mana nke ahụ n'etiti narị afọ nke abụọ, oké ala ọma jijiji mere nke dara akụkụ dị mma nke ụlọ ndị ahụ, bụ́ akara mmalite nke ọgwụgwụ ya..
E sochiri ọdachi ebumpụta ụwa a mbuso agha pirate na narị afọ sochirinụ, ma ndị German ma ndị mba ibe, n'ihi ya, n'etiti ịrị elu na ọdịda ọgwụgwụ ya bịara na narị afọ nke isii.
Ebe ihe ochie nke Baelo Claudia
Onye chọpụtara mkpọmkpọ ebe ahụ bụ Jorge Bonsor. Ihe ndị e gwupụtara n'ala ewepụtala mkpọmkpọ ebe Rome zuru oke na Iberian Peninsula dum na taa ụlọ nsọ Isis, ụlọ ihe nkiri, basilica, ahịa nwere ike ịmata ọdịiche ...
Nhazi obodo nke mkpọmkpọ ebe ndị a magburu onwe ya na soro map ndị Rom nkịtị nwere ụzọ abụọ, na kaadị maximus nke na-agafe ya n'akụkụ aka nri na mgbe ahụ n'ebe ugwu-ndịda na decumanus maximus nke na-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ gaa n’ọdịda anyanwụ wee kwụsị n’ọnụ ụzọ obodo ahụ.
N'ebe ụzọ abụọ a na-esi agafe bụ forum ma ọ bụ isi square, nke ejiri nkume mbụ si Tarifa mee ya, ka a na-ahụ anya ma chekwaa ya nke ọma. Ewubere ọgbakọ ahụ n'oge Ọgọstọs, mana obodo ahụ dum toro nke ukwuu n'okpuru ọchịchị Claudius, n'oge Republic.
Ụlọ ndị ọchịchị dị gburugburu. Enwekwara oghe oghe nke nwere oghere n'akụkụ atọ nke na-abanye na ya ụlọ nsọ nke eze ukwu, curia na ụlọ nzukọ.
N'azụ e nwere ụlọ ọzọ dị mkpa, nke basilica, O nwere ọtụtụ ọrụ, ọ bụ ezie na nke kachasị mkpa bụ oche nke ụlọ ikpe ikpe. N'akụkụ aka ekpe e nweela ọtụtụ ụlọ ndị e wuru na nkume n'ime ha ọtụtụ ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, dịka ọmụmaatụ.
Na nkà mmụta ihe ochie saịtị taa na-echebe ndị kasị nnọchiteanya nke a obodo Rome, ya bụ mgbidi nkume ji ihe dị ka ụlọ nche iri anọ mesie ike, las isi ụzọ nke obodo, nhazi ụlọ dị ka ndị Archive ime obodo ma ọ bụ senate, forum, ụlọikpe nke a na-ahụ maka ya bụ ihe oyiyi nke eze ukwu Trajan nke karịrị mita atọ n'ịdị elu. temple anọ, atọ n’ime ha raara nye Minerva, Juno na Jupiter, nke ọzọ nye Isis; nnukwu Ụlọ ihe nkiri nwere ikike maka puku mmadụ abụọ na foduru nke a ahịa nwere ngalaba pụrụ iche maka ire anụ na nri nwere ụlọ ahịa iri na anọ na patio dị n'ime, ụfọdụ mmiri ọkụ na azụmaahịa ndị ọzọ.
Enweghị obodo Rome na-enweghị ọwa mmiri, yabụ ebe a na Baelo Claudia enwere anọ. E nwere ọwa mmiri anọ na-enye obodo ahụ mmiri ma dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ụlọ ọrụ mpaghara garum, dịka ọmụmaatụ, kamakwa maka ndụ kwa ụbọchị na obodo. Ọ gụnyekwara usoro ịgbapụta mmiri na ọwa mmiri. Nke a bụ n'ezie obodo Rom nke nwere akwụkwọ ozi niile, ya mere ọ bụ ezigbo akụ nke nkà mmụta ihe ochie.
Ọ bụ otu n'ime pearl ihe ochie nke Andalusia, na-agụkwa Italica na mpaghara Seville na Acinipo dị na mpụga Ronda. Ọ bụghị nanị na e chekwakwara mkpọmkpọ ebe ahụ kama eweghachighachiri ya, kwere site na nnukwu ọnọdụ nke nchekwa ha.
Taa na-arụ ọrụ n'ebe a ọbịa Center nke bụ ezi ọnụ ụzọ obodo. Ọ bụ ụlọ simenti nke ndị obodo ahụ jụrụ nke ọma n'oge ahụ, mana ọ na-efunahụ ya nke ọma n'okirikiri ala ahịhịa juru. Enwere atrium etiti, nke na-acha ọcha na mbara ihu enyo na-ele anya n'ụsọ oké osimiri mara mma.
Nleta na etiti bụ ezigbo okwu mmalite maka nleta mkpọmkpọ ebe kemgbe e nwere ihe nlereanya nke obodo n'isi ya na a audio ndu ọ dị ezigbo mma.
Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ụfọdụ akụ na ngosi dị ka ihe oyiyi marble kwenyere na ọ bụ chi nwanyị ụfọdụ ma hụ na Puerta de Carteia, otu n'ime isi ụzọ mbata obodo ahụ, ọkpọkọ ụzọ site na narị afọ nke mbụ, kọlụm weghachiri eweghachi site na basilica na foduru nke ihe oyiyi marble a chọtara n'ime mmiri ịsa ahụ mmiri nke na-anọchi anya ọdịdị nke nwoke na-eme egwuregwu na nke a maara dị ka Doryforus de Baelo Claudia.
A na-enweta mkpọmkpọ ebe site na etiti yabụ enwere ụzọ a tụrụ aro, n'agbanyeghị na ị nwere ike were ụzọ kacha dabara gị mma. N'akụkụ nke fọdụrụ n'ọnụ ụzọ e si abanye n'ebe ọwụwa anyanwụ, e nwere obere olulu mmiri nke n'ihe ọ̀tụ̀tụ̀ mbụ ya dị nanị ihe karịrị kilomita ise n'ogologo ma buru mmiri gaa n'ụlọ mposi ndị dị n'ebe ọdịda anyanwụ. Ekwenyere na ụlọ ịsa ahụ ndị a bụ ma egwuregwu na ntụrụndụ ma dị ka ọ dị na mbụ nwere nnukwu mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na nke dị ntakịrị na nke nzuzo.
N'etiti oghere ndị ọzọ na-elekọta mmadụ bụ square forum, nke a ka na-echekwa ogidi 12 gburugburu ya, basilica na dịka anyị kwuru na mbụ. ụlọ ihe nkiri nke bụ otu n'ime oghere ndị echekwara kpamkpam ma weghachi ya. Ọ bụ na mkpọda ebumpụta ụwa ma weghachi ebe niile oche. A na-ejikwa ya eme ihe n'oge a dị ka ntọala ọgbara ọhụrụ n'oge okpomọkụ mmepụta nke Spanish oge gboo ihe nkiri.
Mgbe e mesịrị, na oke ndịda ọwụwa anyanwụ nke saịtị ahụ, e nwere ọdụ ụgbọ mmiri Ọ dị ezigbo mkpa ịga leta iji mechaa ghọta obodo na akụkọ ihe mere eme ya. Ọ gbasara mpaghara mmepụta ihe, site n'ebe ahụ ebe a na-asa ahụ́ nnu, bụ́ ebe a na-ehicha tuna ma tinye nnu ka ọ chekwaa ya. Nke a bụ ụlọ ọrụ mere Baelo Claudia ọgaranya na ị pụrụ ọbụna ịhụ ụgbụ e weghachiri eweghachi nke ndị Rom na-eji n'oge ahụ azụ ndị nwere azụ̀.
Otu eziokwu fun ikpeazụ? Na 2021 Baelo Claudia bụ ebe ihe nkiri nke usoro Netflix. Okpueze. Ọ ghọrọ Egypt nwa oge mgbe usoro ahụ gosipụtara nleta Lady Di na Egypt na 1992.
Baelo Claudia ozi bara uru:
Oge mmepe: site na Jenụwarị 1 ruo Maachị 31 yana site na Septemba 16 ruo Disemba 31 ọ na-emepe site na Tuesday ruo Satọde site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede yana na Sọnde na ezumike site na elekere 6 nke ụtụtụ ruo elekere atọ nke mgbede. Site na Eprel 9 ruo June 3, ọ na-emeghe site na Tuzdee ruo Satọde site na elekere 1 nke ụtụtụ ruo elekere itoolu na Sọnde yana ezumike site na elekere 30 nke ụtụtụ ruo elekere atọ nke mgbede. Site na Julaị 9 ruo Septemba 9 ọ na-emepe site na Tuzdee ruo Satọde site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere atọ nke mgbede yana site na elekere isii ruo elekere itoolu na Sọnde yana ezumike site na elekere 3 nke ụtụtụ ruo elekere atọ. Na Mọnde ọ na-emechi.
Ụbọchị ezumike ọha na ọnụego bụ Julaị 16 na Septemba 8 ma ụbọchị ndị ahụ saịtị ahụ na-emeghe site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere atọ nke mgbede.
N'oge okpomọkụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe ngosi na amphitheater.
Enwere njegharị eduzi nwere nhazi ọnụahịa.
Ntinye bụ n'efu maka ụmụ amaala EU nwere paspọtụ ma ọ bụ ID. Ma ọ bụghị ya, ọ na-efu euro 1,50.
Uzo esi abia: site na Tarifa n'okporo ụzọ N-340 ruo kilomita 70.2. Tụgharịa gaa CA-8202 ma soro okporo ụzọ mpaghara nke rutere n'ime obodo Ensenada Bolonia. Gaa ozugbo kama ịtụgharị aka ekpe gaa n'akụkụ osimiri na na mita 500 ị ga-ahụ ebe ndị ọbịa na ebe a na-adọba ụgbọala n'efu n'akụkụ aka ekpe.
Ọnọdụ: Ensenada de Bolonia s / n. Tarifa, Cádiz. Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Akụkọ ihe mere eme nke mkpọmkpọ ebe ndị Rom na osimiri Bolonia